Lahatsoratra nataon'i Thibaud Clement momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Thibaud Clement
Thibaud Clement no Lehiben'ny mpanatanteraka sy mpiara-manorina an'i Loomly. Hatramin'ny nahavitany diplaoma an'ny Grenoble Ecole de Management, France ary ny oniversiten'i Ottawa, Kanada tamin'ny 2011, dia niara-niasa tamin'ny vadiny sy i Noemie mpiara-miasa aminy i Clement, nametraka orinasa efatra nahomby.
Media sosialy: toro-hevitra 3 hifandraisana tsara amin'ireo mpanjifanao
Talata, Novambra 19, 2019 Talata, Novambra 19, 2019 Thibaud Clement
Raha ny tena izy, ny haino aman-jery sosialy dia làlana roa-lalana, izay ahafahan'ny marika mihoatra ny marketing nentim-paharazana, ary tena mifandray amin'ireo mpanjifany hampivelatra ny tsy fivadihana amin'ny fotoana. Ireto misy torohevitra telo azon'ny orinasanao ampiasaina hifandraisana tsara kokoa amin'ny mpanjifanao amin'ny media sosialy. Soso-kevitra # 1: manangana rafitra iray tsy hahadino fampandrenesana mihitsy raha mamoaka atiny avo lenta amin'ny kaontinao media sosialy ianao ary mampitombo ny mpihaino anao dia mety izany